Wararka Maanta: Axad, May 6 , 2012-Wasiirka Qorsheynta iyo Xiriirka Caalamiga ah oo la kulmay Wakiilka Wadamada ee WFP.
Wasiirka Qorsheynta iyo Xiriirka Caalamiga ah oo la kulmay Wakiilka Wadamada ee WFP. Axad, May 06, 2012 (HOL): Wasiirka Qorsheynta iyo Xiriirka Caalamiga Cabdulahi Goodax Barre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Stefano Porretti oo ah Wakiilka Wadamada ee WFP. Kulanka labada dhinac ayaa waxaa looga hadlayay arrimaha gargaarka iyo kuwa bini’aadanimo sidii wax looga qaban lahaa.
Ugu dambeyntii Wasiirka Qorsheynta ayaa tilmaamay in hay’adda WFP iyo Xukuumadaba ay ka wada shaqeynayaan hormarinta arrimaha gargaarka iyo sidii wax loogu qaban lahaa dadka Soomaaliyeed.Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha SoomaaliyaMuqdisho, Soomaaliya
Axad, May 06, 2012 (HOL)- Madaxweynaha Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa Digreeto Madaxweyne xilkii uu hayey kaga qaaday Gudoomiyihii Gobolka Salal, Mudane, Maxamed Muuse Bucul, waxaanu gudoomiye cusub u magacaabay gobolkaasi Nuur CIsmaan Guuleed. Taliyaha cusub ee Howgalka AMISOM oo sheegay in howl-galkooda ay ku baahin doonaan Soomaaliya oo dhan 5/6/2012 6:58 AM EST
Axad, May 06, 2012 (HOL) — Taliyaha cusub ee ciidamada AMISOM, Jen. Andrew Gutti ayaa sheegay in howgallada ciidamada AMISOM lagu baahin doono gabi ahaan dalka Soomaaliya, isagoo xusay inay tegi doonaan demgooyinkii laga saaray Al-shabaab. Safaaraddii Somalia ee dalka Zambiya oo la xiray kaddib markii uu dagaal dhexmaray dublamaasiyiin Soomaaliyeed 5/6/2012 6:47 AM EST
Axad, May 06, 2012 (HOL) — Booliiska dalka Zambia ayaa xiray safaaraddii ay ku lahayd Soomaaliya magaalada Lusaaka ee xarunta dalkaas Kaddib markii uu dagaal dhexmaray safiirkii Soomaaliya ee dalkaas iyo safiir cusub oo sheegay inuu xilkaas u magacabaay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Magaalada Muqdisho oo dib loo dhisayo Inkastoo Xaaladda Ammaanka ay weli tahay mid aan Wanaagsanayn 5/6/2012 6:28 AM EST